Rio Ferdinand Oo Daboolka Ka Qaaday Sababtii Angel Di Maria Ugu Fashilmay Man United, Wacdarahana Uga Dhigay PSG, Real Madrid & Argentine - Gool24.Net
Rio Ferdinand Oo Daboolka Ka Qaaday Sababtii Angel Di Maria Ugu Fashilmay Man United, Wacdarahana Uga Dhigay PSG, Real Madrid & Argentine
Halyeygii hore ee Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa ugu dambayntii helay sababtii keentay in xiddiga reer Argentine ee Angel di Maria uu ku fashilmo Old Trafford, isla markaana looga iibiyey PSG sannad kaliya markii uu joogay Red Devils.
Angel di Maria ayaa Manchester United ku biiray sannadkii 2014 isaga oo Champions League kula soo guuleystay Real Madrid, waxaanay kasoo bixiyeen lacagtii ugu qaalisanayd ee ay United ciyaartoy ka bixiso oo xilligaas ahayd £59.7 milyan oo Gini, waxaana Louis van Gaal uu ka dhigay hoggaamiyaha kooxda, taas oo keentay inuu heerkiisii hoos uga dhaco.
Sannad kaddib ayay Manchester United ka iibisay PSG iyadoo gashay khasaare dhan £15 milyan oo Gini marka loo eego lacagtii ay kaga soo iibsadeen Real Madrid.
Isla markii uu tegay PSG, waxa uu dib usoo ceshaday ciyaartiisii, waxaanu noqday xiddig laf-dhabar u ah kooxda reer France waxaanu ka caawiyey inay ku guuleystaan afar horyaal iyo koobab kale oo maxalli ah, isla markaana waxa uu qayb ka soo qaaday guulihii xili ciyaareedkan hadda dhamaaday oo uu semi-finalka soo gaadhsiiyey.
Rio Ferdinand oo xalay ka hadlayay telefishanka BT Sports oo uu falanqeeye ka ahaa kulankii finalka Bayern Munich iyo PSG ayaa sharraxay sababtii keentay in Di Maria uu ku fashilmo Manchester United, waxaanu yidhi: “Waxa uu kusoo baxaa marka xiddigo kale la joogaan. Waxa jira ciyaartooyo doonaya inay noqdaan xiddigo, inay noqdaan ciyaartoyga ugu weyn ee kooxda. Laakiin wiilkani waa ciyaartoy ku faraxsan inuu kaabe ahaado, inuu weheliyo xiddigaha waaweyn.
“Waxa uu sidaas oo kale kasoo ahaa Real Madrid oo uu Ronaldo kala soo shaqeeyey, Argentina oo uu Messi usoo ahaa kaaliye iyo hadda oo aynu arkayso sida uu u yahay Mbappe iyo Neymar.”
Ferdinand soo sii sharraxaya sababtii Manchester United uu ula qabsan waayey waxa uu yidhi: “Manchester United umay shaqaynin, waxayna ila tahay, inay weydiisteen inuu noqdo xoogga hal-abuurka iyo ciyaartoyga ugu weyn, isaguna maaha ciyaartoy noocaas ku habboon.”